Ma taqaana todobada wadan ee Yurub oo ardayda jaamacadaha ka bixiya kharashaadka?… – Hagaag.com
Ma taqaana todobada wadan ee Yurub oo ardayda jaamacadaha ka bixiya kharashaadka?…
Posted on 29 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waqti ay ardayda Mareykanka ku dhibtoonayaan inay dhigtaan jaamacadaha sababta oo ah kharashka waxbarashada oo aad u sareeya, halka khidmadaha wax lagu barto ee dalal badan oo waaweyn oo Yurub ah ay aad u sarreeyaan sida Britain, halka qaar ka mid ah waddamada kale ee Yurub waxay soo jiidanayaan ardayda ka socota meelo kala duwan oo adduunka ah iyagoo bixiya fursado waxbarasho sare oo lacag la’aan ah. Iyada oo la siinayo deeq waxbarasho oo daboolaysa qiimaha waxbarashada.
Toddobada dal ee Yurub oo ay balan qaadayaan waxbarasho sare oo lacag la’aan ah ayaa kala ah:
Waddankan Iskandaneefiyanka ah ayaan ku soo rogin wax khidmad ah waxbarashada ha ahaato jaamacadaha gaarka loo leeyahay ama kuwa guudba.Qarashka dowladda ay ku bixiso arday walba waxaa lagu qiyaasaa $ 2,064 sanadkii, dhalinyarada dhigata jaamacadaha ayaa gaaraya 68%.
Wadanka Denmark ayaa ku bixiya 0.6% waxsoosaarka guud ee dalka (GDP) deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha.Qarashka waxbarashada sare ee arday kasta ayaa ah qiyaastii $ 17,634, dhalinyarada u sharaxan inay aadaan jaamacadaha ayaa gaaraya 55%.
Dalkan ka tirsan Yurub wuxuu ardayda siiyaa deeq waxbarasho oo deeqsinimo ah waxayna maalgelisaa waxbarashadooda iyo qarashaadka nolosha.Qarashka dowlada ee uga baxa arday walba oo dhigta marxaladaha jaamacada waxaa lagu qiyaasaa $ 15,402, tirada dhalinyarada dhigata jaamacadaha ayaa gaaraya 69%.
Ireland ayaa bixisa khidmadaha waxbarasho ee inta badan ardayda jaamacadaha tan iyo sanadkii 1995. Heerka kharashka dowladda oo ay ku bixiso waxbarashada sare arday kasta ayaa ah $ 16,284, waxaana lagu qiyaasaa in 51% dhalinyarada ay aadaan jaamacadaha.
Kharashaadka dowladda Iceland ee arday kasta oo dhigta tacliinta sare waxaa lagu qiyaasaa $ 10429, halka 77% dhalinyarada wadanka ay kujiraan waxbarasho jaamacadeed.
Wadanku wuxuu hogaamiyaa OECD marka loo eego kharashaadka ku baxa deeqaha ardayda iyo kaalmada, taasoo ka dhigan 1.3% GDP-ga dalka.
Kharashaadka dowladeed ee arday walba ee dhigata waxbarashada sare waa $ 18,942, iyada oo lagu qiyaaso 77% dhalinyarada ay dhigtaan jaamacadaha.
Jamhuuriyadda Bariga Yurub waxay bixisaa kaalmooyin yar yar si ay uga caawiso ardayda inay la qabsadaan qiimaha nolosha, iyo sidoo kale deeqo looga bixiyo dhammaan qarashka waxbarasho. Kharashaadka ku baxa waxbarashada sare arday kasta waa $ 8,738. Ku dhawaad ​​59 boqolkiiba dhalinyarada waxay aadaan jaamacadaha.